magorkhe1 1229 days ago
Janawar 1229 days ago
funtush 1229 days ago
Bichitra_Kumar 1229 days ago
रामु जी रामु जी 1229 days ago
urban khasi 1228 days ago
Visitor is reading How many phones can I take with me to Nepal ?
Visitor from US is reading Check this out
Visitor from US is reading SKY BAND
Visitor is reading Nepali Dj around BAltimore.
Visitor from US is reading 18664518555
Posted on 06-01-16 9:01 AM Reply [Subscribe]
मेरी जाँठी ठिटी लास्ट वीकेन्डाँ मुजी दिदी भिनाजु लाई भेट्न गै मुजी फिनिक्स, दिदी चाँहीँ आउने रे नेपाल बिहे मा मुजी भिनाजु को आउन नमिल्ने रे, माटोक्ने कर्ज थियो उनिहरुको, २०००० डलर को चेक् नि लिएर गै, अब मुजी हरु लाई १०००० चुकाउन बाँकी छ्, भाई मुजी को अझै ३०००० बाँकी छ्,मुजी आँखा बाट तुरुक्कै आसुँ आयो रेलोकेशन को बाँकी भा रकम मुजी राँडा हरु लाई दिंदा. अब बाँकी रकम कैले र कसरी दिने हो थाहा छैन, माटोक्ने तुरी सुकेर एक्लै भा बेलाँ ठिटीबाजी नि गर्न मन लागेन, बिहे मा अझै कती खर्च हुने हो - जिन्दगी मुजी मोर्ट्गेज र ऋण तिर्दै जाने भो. लौन मुजी साझा का राजाहरु जसले मलाई माया गर्छन् सबै मिलेर दस दस डलर म गरीब लाई पठाइदिनु न, मुजी कमसेकम रात भरी निन्द्रा लाग्थ्यो राम्रो सित. माटोक्ने कहिले सोचिया थिएन यसरी इन्टर्नेट्र मा भीख माग्नु पर्ला भनेर के गर्नु दैव को मार परेपछी.
खास मुजी यो मेमोरियल वीकेन्डाँ केही भएन, आफु एक्लै, एक्जना दाई पर्ने युनियन सिटी बस्दा रैछन् मुजी फोन गरेको गरै दुई महिना देखी अiइज जि अIइज भेट्न भन्दै लौ त भनेर गैयो सनिवार् बेलुकी, मुजी मेरो जाँठो हजुरबाउ को भान्जा पर्ने का छोरा रैछन्, डीभी परेर मुजी सिद्धै पाँचखाल बाट क्यालिफोर्निया, मुजी कहिले नचिन्या नदेख्या जाँठो को ३ घण्टा सम्म बकवास सुन्न पर्यो, त्यस्माथि मुजी लाई भोड्का पिउनु पर्ने तर सुंघ्ने बित्तिकै माटोक्ने तान्डव गर्लान जस्ता. छोरो रैछ् ५ वर्ष को हेर्दै मुजी हराम्जादा झन्नै मेरो ओक्ली सँग्लास भाँचिदियो.
खैर मुजी नेपाल जाँदै छु बिहे गर्न भनें, सुनेर मुजी भाउजु नि भान्सा बाट पधारिन्, फोटो देखाइयो, माटोक्ने त्यो मुजी दाइ पर्ने ले मेरी ठिटी को बिग सर मा बिकिनी ला फोटो देखेर मुजी घुट्टुक्कै थुक निल्यो, मुजी को होसोहवास् गुम, भाउजु ले “यहीं की हो?” भनेर सोधिन, मैले मुन्टो हल्लाएँ, त्यस्पछी मुजी केही बोलेनन, संगै बस्या थाहा पाएका भए मुजी मलाई लखेटेर घराँ गंगाजल छर्किन्थे होलान्. त्यस्पछी मुजी त्यो दाइ लाई जाँड लागेर उपद्र मुजी सुहागरात मा कसरी 'अप्प्रोच' गर्न पर्छ भनेर फुस्फुसाउन लागे मेरो पालो उठेर लहै भनेर नमस्कार ठोकेर हिंडें.
मुजी जसले जे सुकै भनोस् नेपाल को पतन मुजी हामी नेपालि को भर्जिनिटी को कारण ले हो, मुजी १२ वर्ष देखि सम्भोग गर्न पा भए मन को तृष्णा तृप्त हुन्थ्यो अनि देश विकास मा लागिन्थ्यो, मुजी आधा बैंस आफ्नो गुलो आफैं ले खेलाएर जान्छ अनि घण्टा होस देश विकास? मुजी नेपाल को बिकास गर्ने हो भने स्कूलाँ सेक्स क्लास नि म्यान्डेटरी हुन पर्छ, एस्.एल.सी पास् गर्न मुजी एक घण्टा मा ५ चोटी सहपाठी ठिटी सित सेक्स, नत्र मुजी फेल त्यसो गरे मुजी नेपाली युवा हरु दिमाग अंत लाउंछन् कलेज् मा.
भर्जिनिटी को कुरो सुनेर एउटा विगत को घटना याद आयो एकदिन मुजी रत्ने ले येसरी भएन भनेर “डिल्लिबजारां मेरो मामा को घर सितै टाँसिएको अर्को घराँ मुजी दुइ लोग्ने स्वास्नी चिकामारी गर्छन, हेर्ने भए जाउँ एक रात बस्ने गरि” भन्यो. बल्ल तल्ल मुजी आमा ले मुजी बाउ लाइ खुसामद गरेर सुक्रवार मुजी रत्ने को मामा काँ जान पाइयो. करीब आठ बजे मुजी साइकिलाँ म, रत्ने, खर्पन र एउटा मुजी हेर्दै खान नपाको रेग्मी बाउन जो खर्पन को छिमेकि थ्यो - डिल्लीबजार पुग्यौं.
कुरो के रैछ भने मुजी छिमेकि को छोरो को बिहे भा रैछ, मुजी को कोठा मा पर्दा नाईं, त्यस सितै टाँसिएको झ्याल मुजी रत्ने को मामा को पुजा कोठा जसमा पर्दा थियो. राति पुजा कोठा मा कहिले नि बत्ती बाल्ने गर्या थिएन मुजी छिमेकि कोहि छैन भनेर ड्याम कि ड्याम, फेरी देख्ने चाहिं रत्ने को मामा को सुपुत्र बिशाले माटोक्ने मर्न मात्र नसकेर फुपू को छोरो लाइ भनेछ.
खैर मुजी हामि पांच भाइ सुटुक्क पुजा कोठा छिर्यौँ अनि बत्ति निभाएर पर्दा येस्सो उघारेर मुजी हेर्या छिमेक मा कोइ छैन. माटोक्ने आधा घण्टा पछि दशाहरी आयो र स्वास्नी छिर्ने बित्तिकै मुजी चोलो खोल्न लायो, किस खायो, दुध माढ्यो, आफू लाइ खपी सक्नु भएन मुजी रेग्मी बाउन मर्ने लाग्यो, त्यसपछि मुजी ठिटी पुरै नाङ्गै मुजी केटि को "पब्लिक" हेयर देखेर रेग्मी बाउन "त्यो कालो कालो के हो?" भनेर सोध्छ पो त. माटोक्ने बिशाले र रत्ने हाँसेर मुर्छै पर्न लागे उता भने मुजी छिमेकि ड्याम कि ड्याम. रेग्मी बाउन बेहोस मात्र हुन बाँकी थ्यो त्यहि बेला मुजी छिमेकि ले सिद्ध्यायो. बिशाले ले “ल अब जाउँ सुत्न" भनेर भन्या मात्र के थ्यो मुजी खर्पनले ज़िप्पर लगाको आवाज आयो अँध्यारो मा,
भनेछी मुजी ले पूजाकोठा मै हस्ते दिएर निकालेछ, बिशाले रीस ले चूर मुजी खर्पन लाइ भैं मा सुत्न लायो.
अनि खर्पन को आर्ग्युमेण्ट "मुजी पूजाकोठा बाट हेर्न चाहिं हुने, छोल्न नहुने?"
अब यसै गरि पूजाकोठा मा हस्ते दिनु हुने महाशय हरु साझा मा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न येसो थाहा पाउँ न.
Posted on 06-01-16 10:19 AM [Snapshot: 98] Reply [Subscribe]
कस्तो साला पाजी "खर्पन" परेछ त् ! पुजा कोठामै हस्ते दिने ! म त् सक्दिन बा तेस्तो हर्कत गर्न ! आफुलाइ कहिले काही येसो सेक्सी फिल हुँदा चै, शावोरमा मजाले दिन्छु हौ !
यो अन्डुसेको बिहेमा जान पाको भए चै अति नै रमाइलो हुन्थ्यो ... खैर ...
Posted on 06-01-16 10:40 AM [Snapshot: 137] Reply [Subscribe]
खर्पनेले सुहागरातमा ढ्याम पार्नु अगिनै स्खलन भै ढाल को नास पार्ने रहेछ / होला |
गङ्गाजल को कुरा सुने पछि याद आयो : एउटा गाउले PHD गर्दै थिए : एक दिन हाम्रो dorm मा आएको बेला मैले मलाइ हुर्काएकि बजैको ३ दिने एक्छाकिमा थिए | तिनले पनि तेसै गरे : पानि धरी पिएनन : आफ्नो डोर्ममा गएर गङ्गा जल छर्के कि ? अफ्ट्यारो मानि मानि बसेका थिए |
Posted on 06-01-16 11:54 AM [Snapshot: 210] Reply [Subscribe]
"मुजी आधा बैंस आफ्नो गुलो आफैं ले खेलाएर जान्छ अनि घण्टा होस देश विकास? " हैट
Posted on 06-01-16 1:17 PM [Snapshot: 333] Reply [Subscribe]
हाहा मेरो पनि एक ताका कलेजको चर्चमा काम थियो | त्येही बसेर एक जना ब्यांगकक् कि तरुनी संग रतिक्रिडा भएको सम्झियो लोल | पुजा कोठा जस्तै तर मोर स्पेसीयस
Posted on 06-01-16 1:42 PM [Snapshot: 373] Reply [Subscribe]
काठमाडौँमा गर्भपतनको डरलाग्दो रूप : प्लस टु पढ्ने किशोरी सबैभन्दा धेरै
जेठ १९ | मदन ढुंगाना
काठमाडौँ– नेपालमा २०५८ सम्म गर्भपतन गर्नु र गराउनु कानुनी अपराध थियो । यदि कसैले गर्भपतन गराएमा त्यो कानुनको उल्लंघन हुने भन्दै धेरै डाक्टर तथा नर्स र स्वयम् गर्भपतन गराउनेले पनि जेलसम्म जानुपरेको थियो । यतिसम्म कि कतिपय घटनामा त बलात्कार तथा कम र बढी उमेरमा गर्भवती, बिरामी आदि भएमा पनि गर्भपतन गराउन ज्यादै समस्या थियो । गर्भपतनको विषयलाई लिएर महिला अधिकारकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलन नै गरेपछि सरकारले २०५८ देखि गर्भपतनसम्बन्धी कानुन ल्यायो र गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दियो ।
गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएपछि यतिबेला गर्भपतन सामान्य विषय बनेको छ । उमेर नपुगेका, उमेर बढी भएका, रोगी आदिमात्रै होइनन्, बच्चा जन्माउन सक्षम युवतीले पनि यो वा त्यो कारणले गर्भपतन गराइरहेका छन् । सामान्य अवस्थामा कुल गर्भवती भएकामध्ये १२ देखि १५ प्रतिशत महिलाको गर्भपतन हुने गर्छ । यस्तो अवस्था भनेको जटिलता आएर आफैँ गर्भपतन हुने र गराउने प्रक्रिया हो । तर, अनिच्छामा गर्भ बसेकोदेखि अहिले पनि लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउनेको संख्यामा कमी आएको छैन । काठमाडौँ जिल्लालाई हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा २५ हजार ४ सय ६२ महिला सुत्केरी भएको देखिएको छ, जब कि सोही आर्थिक वर्षमा १३ हजार सात सय ५७ महिलाले कानुनी हिसाबले गर्भपतन गराएका थिए । जुन कुल सुत्केरी भएका महिलाको संख्यालाई हेर्ने हो भने गर्भपतन गराउने महिलाको प्रतिशत ३५ भन्दा बढी छ । जुन महिला स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले यसलाई खराब भन्छन् जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका तथ्यांक अधिकृत पुष्कर बिजुक्छे ।
कुन उमेर समूहका कति महिला ?
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँमा उपलब्ध तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा गर्भपतन गराउने १३ हजार ७ सय ५७ महिलामध्ये तीन हजार चार सय ५८ त किशोरी थिए । २० वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरी गर्भवती हुनु र बच्चा जन्माउनु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले राम्रो होइन । तर पनि तथ्यांकले गर्भपतन गराएका महिलामध्ये २५ प्रतिशत महिला २० वर्षभन्दा कम उमेर समूहको रहेको देखाएको छ ।
तथ्यांकमा देखिएअनुसार गत आर्थिक वर्षमा गर्भपतन गराउने १३ हजार ७ सय ५७ महिलामध्ये १० हजार २ सय ९९ महिला भने २० वर्षमाथिका छन् । २० वर्षमाथिका भनिए पनि कति वर्ष सम्मकाले गर्भपतन गराए भन्ने उल्लेख भएको छैन ।
– गर्भपतन गराउनेमा प्लस टु पढ्ने किशोरीको संख्या उच्च
– गर्भपतन गराउनेमध्ये अधिकांश अविवाहित
– बढी गर्भपतनले महिलालाई हानि
– भविष्यमा गर्भ नै नबस्ने खतरासमेत
कुन विधिबाट कति गर्भपतन ?
गर्भपतन सामान्यत दुईप्रकारबाट गराइन्छ । औषधि खुवाएर र अपरेसन गरेर । मेडिकल क्याक अर्थात् औषधि खुवाएर नौ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा काठमाडौँ जिल्लामा भएका गर्भपतनमध्ये ४ हजार ९ सय ८० जनाको गर्भपतन औषधि खुवाएर गराइएको देखिएको छ । यसरी औषधि खुवाएर गराइएका गर्भपतनमध्ये १ हजार ४ सय ९७ गर्भवती किशोरी अर्थात् २० वर्षमुनिका थिए । बाँकी ३ हजार ५ सय २३ महिला भने २० वर्षमाथि उमेर समूहका थिए ।
यस आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म पनि गर्भपतन गराउने ७ हजार ६ सय ४२ गर्भवतीमध्ये ३ हजार ४० महिलाले औषधि खाएर नै आफ्नो गर्भ पतन गराएका छन् । जसमध्ये ८ सय ५९ गर्भवती २० वर्षभन्दा कम उमेरका छन् भने २ हजार १ सय ८१ महिला २० वर्षमाथिका छन् ।
सामान्य अवस्था र शिक्षाको स्तर राम्रो भएको देशमा सर्जिकल अर्थात् अपरेसन गरेर गर्भ तुहाउनेभन्दा औषधि खाएर गर्भपतन गराउने दर बढी छ । तर, ९६ प्रतिशत शिक्षित मानिस बस्ने भनिएको काठमाडौँमा भने औषधि खाएरभन्दा बढी अपरेसन गरेर गर्भपतन गराउने दर बढी छ । नेपालको कानुनले अहिले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन छुट दिएको छ । डाक्टरको सल्लाह र स्वास्थ्य समस्या भएमा १८ हप्तासम्मको गर्भलाई पनि पतन गराउन पाइने कानुन छ । हाडनाता करणी तथा आमाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भएमा अन्य जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भपतन गराउन सकिने कानुन छ । ९ हप्तासम्म पनि गर्भ रहेको थाहा नभएमा वा कुनै कारणवश ९ हप्तापछि पनि बच्चा जन्माउन नचाहेमा अपरेसन गरेर गर्भपतन गराउन सकिन्छ र गराउने हो । तर, ९ हप्तापछि पनि अपरेसन गरेर गर्भपतन गराउने दर भने उच्च देखिएको छ, काठमाडौँमा । गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौँमा भएको कुल १३ हजार ७ सय ५७ गर्भपतनमध्ये ६३ प्रतिशतभन्दा बढी सर्जिकल एबोर्सन भएको छ ।
गर्भपतनमा किशोरीको संख्या पनि उच्च
काठमाडौँमा ८ हजार ७ सय ३७ महिलाले अपरेसन गरी गर्भपतन गराएका छन् । त्यसमध्ये १ हजार ९ सय ६१ गर्भवती किशोरी अर्थात् २० वर्षमुनिका छन् । ६ हजार ७ सय ७६ महिला भने २० वर्षमाथिका छन्, जसले अपरेसन गरी गर्भ तुहाएका छन् ।
त्यसैगरी यस आर्थिक वर्षको ७ महिना अर्थात् माघ मसान्तसम्ममा अपरेसन गरी गर्भपतन गराउने ४ हजार ६ सय २ मध्ये १ हजार २ जना २० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका छन् । जुन खतरनाक अवस्था हो भन्छन् जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका तथ्यांक प्रमुख पुष्कर बिजुक्छे ।
तथ्यांकमा देखिएभन्दा दुई गुणा बढी छ गर्भपतन
यसरी देशको राजधानी काठमाडौँमा अहिले गर्भपतन गराउनेको संख्या बढिरहेको छ । यो तथ्यांक त सरकारी स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा आएका सेवाकेन्द्र वा अस्पतालले उपलब्ध गराएका तथ्यांक हो । त्योबाहेक अहिले पनि आधाभन्दा बढी संस्था त जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग सम्बन्ध नै राख्दैनन् र उनीहरूले कतिजनाको गर्भपतन गराए वा कसरी गराए त्यसको कुनै तथ्यांक नै छैन । कतिपयले आफैँ मेडिकलबाट औषधि किनेर खाने र गर्भपतन गराउनेसम्म गरिरहेका छन्, जसकारण तथ्यांक योभन्दा दुई गुणा बढी रहेको बताउँछन् ओम अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भोला रिजाल ।
गत आर्थिक वर्षमा भूकम्प गएपछि गर्भपतन गराउनेको संख्यामा वृद्धि भएको थियो । तर, यस आर्थिक वर्षमा पनि त्यसको अनुपातमा कुनै कमी आएको छैन । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा गर्भपतन गराउनेको संख्या र अनुपात झन् बढ्ने देखिएको छ ।
प्लस टु पढ्ने किशोरी बढी गर्भपतनमा, गर्भपतन गराउनेमध्ये अधिकांश अविवाहित
अनिच्छामा गर्भ रहेमा गर्भपतन गराउनु नराम्रो होइन । तर, कुन उमेर समूहकाले गर्भपतन गराइरहेका छन् र किन गर्भपतन भइरहेको छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । अहिले गर्भपतन गराउने २० वर्षमुनिका धेरैजसो प्लस टु पढ्ने किशोरी रहेको बताउँछन् जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका तथ्यांक अधिकृत बिजुक्छे । ‘अहिले २२ वर्षमुनिका जतिले गर्भपतन गराइरहेका छन्, उनीहरू अधिकांश अविवाहित छन्,’ बिजुक्छेले थपे ।
यसरी अहिले काठमाडौँमा गर्भपतन गराउनेको संख्या बढिरहेको छ । यसरी गर्भपतन बढ्नुमा असुरक्षित यौन सम्पर्क प्रमुख कारण रहेको देखिएको छ । यौन स्वास्थ्यबारे पर्याप्त जानकारी दिन नसक्दा र परिवारनियोजनको अस्थायी साधन प्रयोगमा बढ्दै गएको अनिच्छा नै यसरी गर्भपतन बढुनुको प्रमुख कारण हो ।
धेरै गर्भपतन गराएमा के हुन्छ ?
महिला स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले गर्भपतन कदापि राम्रो हुनै सक्दैन । गर्भपतन भनेको अन्तिम अवस्थामा मात्रै गर्ने हो । तर, जसरी असुरक्षित यौन सम्पर्क वा अस्थायी साधन प्रयोगमा अनिच्छाका कारण बसेको गर्भ पतन गराइँदै छ, यसले महिला स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । प्रसूति गृहका निर्देशक डाक्टर जागेश्वर गौतम भन्छन्, ‘पहिलो बच्चा अगाडि नै गर्भपतन गराउन थालियो भने भविष्यमा गर्भ नै नबस्न पनि सक्छ ।’
गर्भपतनमा अविवाहित अगाडि
अहिले विवाहितले भन्दा बढी अविवाहितले बढी गर्भपतन गराइरहेको बताउँछन् निर्देशक गौतम । यसको अर्थ आफ्ना यौनसाथीसँग अस्थायी साधन प्रयोगमा पर्याप्त छलफल नहुनु नै प्रमुख कारण रहेको उनको दाबी छ । प्रेममा रहेका जोडीमा यो समस्या बढी रहेको गौतमको भनाइ छ । यतिसम्म कि अविवाहित युवतीले चारपटकसम्म गर्भपतन गराएको तथ्यांक भेटिएको उनको भनाइ छ ।
विवाहपूर्व नै पटक–पटक गर्भपतन गराइसकेपछि विवाहपछि चाहेर पनि गर्भाधान गर्न गाह्रो हुने गौतम बताउँछन् । अस्पतालमा बच्चा नभएर आउने धेरै महिलामध्ये विवाहपूर्व पटक–पटक गर्भपतन गराएका धेरै भएको गौतम बताउँछन् ।
महिलाले पटक–पटक गर्भपतन गराउँदा त्यसले महिला स्वास्थ्यमा पनि असर गर्ने बताउँछन् ओम अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भोला रिजाल । गर्भ बसेको थाहा भएलगत्तै एक÷दुई महिनामै गर्भ पतन गराएमा कम जोखिम भए पनि आठ हप्तापछि गरिने गर्भपतनले महिलालाई गम्भीर असर गर्ने रिजाल बताउँछन् । नौ हप्तापछि औजार प्रयोग गरेर गर्भपतन गराउनुपर्ने भएकाले महिलाको पाठेघरमा घाउ हुने, भ्रुणका टुक्रा बाँकी बसे त्यसले इन्फेक्सन निम्त्याउने आदि समस्या हुन सक्छन् । गर्भपतनपछि नियमित रजस्वाला नहुने र गर्भपतनलगत्तै तीनमहिने सुई लगाउने वा अन्य औषधि खानुपर्ने हुन्छ । जब कि पहिलो सन्तानअगावै संगिनी सुई लगाउनाले महिलाको डिम्ब निष्कासनलाई पूर्णत रोकिदिन सक्छ, जसकारण भविष्यमा गर्भ नै नरहन पनि सक्छ ।
गर्भपतनपछि प्रयोग गर्ने औषधि र शारीरिक अवस्थाका कारण महिलाको तौल बढ्न सक्ने रिजाल बताउँछन् । त्यतिमात्रै होइन, गर्भपतनपछि महिलाको मानसिक अवस्था पनि पहिलेजस्तो तन्दरुस्त नहुन सक्छ ।
यसरी महिला स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले गर्भपतन राम्रो हुँदै होइन, यद्यपि सामाजिक आर्थिक र मनोवैज्ञानिक कारणबाट यो खराब नै छ भन्नेचाहिँ होइन । तर, जुन रूपमा जसरी काठमाडौँमा गर्भपतनको संख्या बढिरहेको छ, त्यसले महिला स्वास्थ्यबारेमा सोच्नैपर्ने बनाएको छ । अझ २० वर्षमुनिका किशोरी, अविवाहितले बढी गर्भपतन गराउनुले अस्थायी साधन प्रयोगसम्बन्धी जनचेतना नै नपुगेको हो कि भन्ने पनि औँल्याएको छ ।
- See more at: http://www.ratopati.com/photo-news/54171/#sthash.FAUoKfVM.dpu
Posted on 06-01-16 2:08 PM [Snapshot: 447] Reply [Subscribe]
१२ पढ्दा होस्टेल छेउमा एउटि सरस्वती भन्ने बस्थि, दुध ठुला भएर नाम नै सिलिकन राख्देको थियम हामिले..११ मा पढ्थी कुन चै कलेजमा हो कुन्नी डे सिफ्ट मा, हाम्रो थ्यो निस्टमा मर्निङ शिफ्ट.. मोरी कलेजबाट फर्केको देख्नासाथ हामी यौन-पिपासुहरु स्टोर-रुमतिर दौड हानिन्थ्यो हस्ते हान्न, अधेरो कोठोको वेन्टिलेसनबाट खुब चिहाइयो..पर्दा थिएन क्यारे मोरीको कोठोमा..खुबै हेरियो खुबै हस्ते हानियो..लाईफमा फर्स्ट टाइम लाईव दुध देख्या उस्कै हो ल, सम्झिदा अझै रमाइलो लाग्छ गाठे!!
Posted on 06-01-16 4:29 PM [Snapshot: 712] Reply [Subscribe]
"गर्भपतन गराउनेमा प्लस टु पढ्ने किशोरीको संख्या उच्च"
हैट ! जमाना कहाँ देखि कहाँ पुगीसकेछ ... हेर त् ! आफ्नो नि प्लस टू हुँदा दरो लभ परेको थियो, आफ्नो भू.पु संग ! जाँठीले मरे गए गर्न दिंदैन थिईन .... तर कहिले काँही मोरीलाइ माया लागेर ढुक्कुरचै खेलाइदिन्थिन !
Posted on 06-01-16 10:05 PM [Snapshot: 1156] Reply [Subscribe]
थुक्क मुजी बोकाहरु!
नाइस वोन कट्टु ब्रो....!
अन अदर नोट , पैसा टमाटर जस्तै फल्छ कि क्या हो ब्रो...